Semalt Expert: Torolàlana iray mba hisorohana ny Google tsy hikotika Old Sitemaps
Rehefa mihalehibe ny tranonkalanao, dia hiezaka mafy ianao hahita fomba hanatsarana ny fahitana sy ny fahatokisana amin'ny Internet. Indraindray, ny fiantraikan'ny fomba fiasan'ny tranokalanay dia mijanona ao ambadik'izany, ary eto no tokony handinihantsika ny soso-kevitra.
Mankanesa amin'ireto torohevitra manaraka ireto avy amin'i Max Bell, mpitantana ny Success Suisse amin'ny Semalt , mba hisorohana ny Google tsy hikirakira tranokala taloha.
Herinandro vitsy lasa izay, ny iray tamin'ireo mpanjifako dia nilaza tamiko fa manana tranokala e-commerce izy. Nandalo fanovàna samihafa: avy amin'ny tranokala URL mankany amin'ny sitemap, novana ny zava-drehetra mba hahitana ny toerana hita maso.
Nandinika ny fiovana sasany tao amin'ny Google Search Console ny mpanjifa ary nahita ny fahadisoana misesisesy tao. Izay noheveriny fa maro ny URL taloha sy vaovao izay niteraka fitohanana sandoka. Ny sasany amin'izy ireo, kosa, dia nampiseho ny Access Denied 403 ary tsy nahita 404 diso.
Ny mpanjifako dia nilaza tamiko fa ny olana lehibe indrindra nananany dia sitemap taloha izay nisy tao amin'ny ordinatera fototra. Ny tranonkalany dia nampiasa karazana Google XML Sitemaps plugins teo aloha, fa ankehitriny dia miankina amin'ny WordPress SEO amin'ny Yoast izy noho ny sitemap. Na dia eo aza ireo plugins efa tranainy marobe, dia namorona korontana ho azy. Izy ireo dia tonga tao amin'ny lahatahiry noforonina antsoina hoe sitemap.xml.gz. Hatramin'ny nanombohany nampiasa ny plugins Yoast mba hamoronana sitemap ho an'ny lahatsoratra rehetra, pejy sokajy sy tags, tsy mila ireo plugins intsony izy. Indrisy anefa fa tsy nametraka ny sitemap.xml ilay olona..gz ao amin'ny Google Search Console. Nalefany fotsiny ny sitemap Yoast, ary Google dia nitady ny sitemap taloha ihany koa.
Inona no hotadiavina?
Tsy namafa ilay sitemap taloha tao amin'ny lahatahiry root ilay olona, ​​ka izany koa no voasarika. Niverina tany aminy aho ary nanazava fa ny sitemap dia soso-kevitra fotsiny izay tokony hikorontana amin'ny valin'ny fikarohana . Heverinao angamba fa ny fanesorana ny sitemaps taloha dia hampitsahatra ny Google tsy hikirakira ny URL diso, saingy tsy marina izany. Ny zavatra niainako dia milaza fa manandrana manindry ny adiresy URL isa im-betsaka isan'andro i Google, ary manome antoka fa tena diso ny hadisoana 404 fa tsy loza.
Ny Googlebot dia afaka mitahiry ny fahatsiarovana ireo rohy taloha sy vaovao izay hita ao amin'ny sitemap ao amin'ny tranokalanao. Mandeha mitsidika ny tranokalanao amin'ny fotoana fohy izy, ary manome antoka fa ny pejy tsirairay dia voasokajy araka ny tokony ho izy. Ny Googlebot dia manandrana manombatombana raha toa ka marina na tsy manan-kery ny rohy mba tsy hahitan'ny mpitsidika olana.
Mazava fa ny mpampiasa web dia hikorontana rehefa mitombo ny isan'ny fisafotofotoana miseho. Te hampihena azy io amin'ny ankapobeny ny rehetra. Ahoana ny fampahafantarana an'i Google tsy hiraharaha ireo sitemap taloha rehetra? Azonao atao izany amin'ny famonoana ireo fitadiavana tsy an-kiato sy tsikitsikitsiky rehetra. Teo aloha, ny hany fomba ahafahana manova izany dia ny .htaccess files. Misaotra WordPress amin'ny fanomezana antsika plugins.
Ireo tranonkala WordPress dia manana ity rakitra ity ao amin'ny lahatahiry root. Noho izany, mila miditra amin'ny FTP ianao ary mametraka ireo rakitra miafina ao amin'ny QPanel. Mankanesa amin'ny safidin'ny File Manager mba hanitsiana ity tahiry ity araka ny fangatahanao. Tsy tokony hohadinoinao fa mety hanimba ny tranokalanao ny fanitsiana azy io, ka tokony hamerina foana ny angona rehetra ianao.
Raha vao tafiditra ao amin'ny rakitra ny sombintsombiny, dia tsy hisy intsony ny URL rehetra efa tapitra amin'ny hadisoana. Aza adinoina fa tian'i Google hitazona ny tranokalanao ianao, hampihena ny sakana amin'ny 404 diso Source .